NOOCYADA UGU CAANSAN EE DOOFAARKA LEH SAWIRRO - MUSHROOMS
Svinushka Mushroom aad u caan ah oo caan ah oo loogu talagalay dadka wax soo saarka leh. Waxay u muuqaneysaa muddo dheer ka hor inta aan boqollaalka kale iyo fara badan oo kala gedisan ilaa dayrta goor dambe.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay sharaxaadda dibadda, boqoshaada svinushka waxay u eg yihiin dhegta doofaarka. Tani waxay u muuqataa mid lagu arko kabaha sii kordhaya ee fangaska. Sababta tani waxay ahayd lugta, kaas oo aan ku lifaaqneyn xariiqda fangaska, laakiin barokacay.
Tixgeli noocyada doofaarka fungus iyo eeg haddii ay cuni karaan.
Svinushka dhuuban (lat. Paxillus integrautus)
Doofaarka khafiifka ah ayaa ah boqosha of qoyska Svushushkovye ee amarka Boletovye. Hadda fungus waxaa loo tixgeliyaa sunta, iyo ilaa 1981 waxaa loo daweeyey sida xaalad la cuni karo. Doofaar khafiif ah ayaa ku kora kaymaha noocyo kala duwan oo ay la mid tahay sharaxaadda noocyo kale oo fangas ah. Cap ee fungus ku kora dhexroor ah oo ah 12-15 cm, wuxuu leeyahay midabka olive-brown. Ugu horreyn, waxay leedahay qaab muuqaal leh oo leh qaab ciriiri ah, ka dibna waa isku mid oo leh diiqad jilicsan oo dhexdhexaad ah. Wareegtu way hoos u dhacdaa, laga yaabo in la isku jiido. Koofiyadu waa fareem, madow mugdiga. Dusha sare ee uu dareemay-qalafsan yahay, iyo dambe ee siman, cimilada qoyan - dhegaysiga. Saxarka fangaska waa cufan, jilicsan marka ugu horeysa, iyo fungus dadka waaweyn oo dabacsan, huruud ah-bunni. Kama duwanaanin urta gaarka ah iyo dhadhanka waxayna noqon kartaa duufaan.
Qeybta hoose ee daboolka waxaa ku yaala midabka jilicsan ee jaalaha ah, kaas oo si sahlan u fiiqi kara saxanka dabka. Musqul dabada - illaa 9 cm oo dheer iyo 2 cm dhexroor. Dusha ayaa ah mid cidhiidhi ah, caajis, caarad huruud ah, wax yar oo khafiif ah oo midabkiisu ka badan yahay cap. Spin spin svinushki budada khafiif ah. Xubno badan oo mushahar ah ayaa ku doodaya ku saabsan sifooyinka sunta ee svushka khafiif ah. Waxay ku andacoodaan in ay u isticmaalaan Mushahaan marwalba mar walba waxaan dareemayaa wanaag. Aan aragno, dhuuban yaryar - fungus sunta ah ama aan. Markii ugu horraysay ee la cuno doofaarka sannadkii 1944 ayaa la xusay. Jarmalka jarmalka Julius Schaeffer ayaa dareemay xanuun aan fiicnayn, taasoo keentay matag, shuban iyo qandho. 17 maalmood kadib ayuu dhintay. Sababtu waxay ahayd fashil la'aanta kelyaha.
Waxa ugu muhiimsan waa in astaamaha sumowga aysan mar walba muuqan isla markiiba. Doofaarka waxaa ku jira walxaha sunta ah ee lectins, kuwaas oo aan la burburin daaweynta kulaylka. Sannadaha 80aad ee qarnigii labaatanaad Dhakhtarka Swiss-ka Rene Flammmer ayaa ogaaday in antigariyaanka doofaarku uu awood u leeyahay inuu xakameynayo xuubka laf-dhabarka iyo inuu ku adkeysto habka difaaca jidhka si uu u soo saaro unugyada difaaca jirka lana dagaallamo unugyada dhiigga cas. Sidaas darteed, qofku wuxuu ku dhacaa dhiig-yaraanta dhiig-yari iyo dhiig-karka. Maaddaama ay qaadato wakhti yar oo jirka ah si loo soo saaro unugyada difaaca jirka, astaamaha sumowga ayaa laga yaabaa inaanay isla markiiba muuqan. Sidoo kale, dareenka wax-qabad ee wax-soo-saarka walxaha musqulaha wuu ka duwan yahay. Sidaa daraadeed, sannadkii 1984, oo ku xigeen u ah madaxa dhaqaatiirta caaafimaadka ee USSR, doofaar khafiif ah ayaa liiska ku jira liiska boqoshaada sunta ah.
Waa muhiim! Ma jirto wax liddi ku ah sunta doofaarka. Haddii, ka dib markaad cunayso boqoshaada, waxaad dareemeysaa wax xun, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto hay'ad caafimaad si loo kormeero xuduudaha dhiigga, shaqada kelyaha, cadaadiska dhiigga, biyaha iyo dheellitirka dheecaanka iyo isbedelka saxda ah.
Doofaarka doofaarka (Paxillus filamentosus)
Argagixisada alfinfiga ama qashinka loo yaqaan 'aspen' waa noocyo aan caadi ahayn. Magaca ka helay booska la doorbidayo ee kobaca ee hoostiisa ama alert. Waxay leedahay noocyo badan oo dibadda ah oo la mid ah doofaar khafiif ah, laakiin waxa ay ku kala duwanyihiin daboolka leh dusha sare ee dillaacsan oo leh jaalle huruud ah. Noocyada Alpine, iyo sidoo kale dhejinta khafiifka ah, waa sun, xitaa inkastoo qaar ka mid ah dadka wax soo goynaya ay weli tixgelinayaan xaaladdan la cuni karo.
Doofaarka dufanku (dareemay) (latunella atrotomentosa)
Noocyada ugu caansan ee doofaarka waxaa ka mid ah doofaarka khafiifka ah iyo doofaarka qarada. Tani waa miis ka mid ah qoyska Tapinella ee amarka Boletov. Mushta waxay leedahay dabool leh dhexroor ah 5-15 cm, koorsada ugu horeysa, qaab-dhismeedka qaabka, iyo ka dibna lingual leh hudheello qaab-qaabaysan ee xarunta. Dusha sare ee daboolka waa cufan ama siman oo leh midab casaan leh. Cirifka ayaa la jarjaray. Laga soo bilaabo dhinaca hoose wuxuu leeyahay lakab jilicsan oo jilicsan-midabada leh ee boqoshaada dhalinyarada ah iyo bunni buni ah. Lugta waa qiyaastii 7 cm oo dherer ah iyo dhexdhexaad ah ilaa 3.5 cm oo ah qaabka cylindrical, waxaa lagu dhejin karaa bartamaha ama barafka dambe.
Dusha sare waa mid jilicsan, midab madow ah. Badanaa gebi ahaanba waa la marsiiyey substrate. Saxarka fangaska waa midab huruud ah oo jaale ah oo aan lahayn urin gaar ah oo dhadhan qadhaadh leh. Waxay awood u leedahay in ay bararaan marka ay joogaan qoyaanka waxayna ku madoobaanayaan kinkaha. Dufanka miira ee boqoshaada midabka jaalaha ah. Ammonia dyes hilibka doofaarka qaro weyn ee midabka lilac dhalaalaya, iyo potassium hydroxide (KOH) - ee cagaaran iyo madow. Kediska xaydha ee Svushka ayaa loola jeedaa boqoshaada cagaaran ee la cuni karo. Dibadda waxaa loo tixgeliyaa mid aan la dabooli Karin ama leh astaamaha sunta ah. Saxarka fangaskaas waxaa ku jira atromentin (pigment brown), oo u dhaqma sidii antibiyootiko ah oo leh saameyn antitumor ah, telefeforeic acid (pigment buluug), oo loo isticmaalo dheeha buluuga ah.
Basinella panusoidal, ama jilicsanaan-dhagax ah (Tapinella panuoides Latin)
Doofaarka dheguhu waa mid daran. Miisaanka fangasku wuxuu yeelan karaa ku xirnaanta dhinaca dambe ee qaababka qaabab isku dhejisan oo leh dhexroor illaa 16 cm, kaas oo si habeysan loogu dabooli karo meerkariimyada mudada gaaban. Dusha sare ee daboolka waa la dareemay, ka dibna wuu siman yahay, laga bilaabo caleenta jaalaha ah ilaa caleemo-casaan. Cirifka fangaska waa dhuuban, oo la jiido, wuxuu noqon karaa xargo. Laga soo bilaabo hoose ee koofiyuhu wuxuu leeyahay taarikooyin cidhiidhi ah oo ka samaysan kareem jaale ah ilaa liinta.
Saldhigga fangaska waa cufan, qoyan, bunni ah. Jidhku waa fareem, midab khafiif ah oo midab leh, wuxuu noqdaa mid xoqan marka qallalan. Mushroom wuxuu ka soo baxaa xagaaga dambe ilaa dayrta goor dambe ama koox koox ah oo ku yaalla dhuxul ama alwaax. Fungus waxay ku degi kartaa dusha sare ee dhismayaasha qoryihii hore, taasoo keenaysa burburintooda. Doofaarka dhegta waxaa loola jeedaa boqoshaada sunta liidata sababtoo ah jiritaanka lectins. Waxyaabaha sunta ah waxay keenaan unugyada dhiigga cas.
Ma taqaanaa? Magaca miisaanka basinetusususnaya ee loo yaqaan turjumista.
Paxillus ammoniavirescens doofaarro
Mushahaan waxaa laga helaa beeraha magaalooyinka iyo kaymaha Talyaaniga, Jarmalka, Isbaanishka, Iswidhan, Portugal, Faransiiska, England iyo dalalka waqooyiga Afrika. Wuxuu loola jeedaa sunta. Daboolka fangaska waa mid adag, cufan, jaale-cadaan midab leh, ilaa 12 cm dhexroorka, jidhka fungus laftiisu wuu koraa, ilaa 10 cm oo dherer ah. Inta badan waxay si weyn u koraan xilliga dayrta. Cuntooyinka fangaska waa kuwo waaweyn, midab madow.
Boqolkiiba geedka Paxillus ayaa lagu tilmaamay inuu yahay sumad halis ah isla markaana waxay la mid tahay sharaxaadda chaboris (Cinjirka Clitocybe). Noocyada qotada dheeriga ah waa buni, halkii ay ka mid yihiin taarikada cad ee hoostiisa iyo brown, aan lahayn cadarka cad, sida kuwa govorushek ah. Finku wuxuu inta badan ku koraa lindens ama geedo kale oo ballaaran ama caleemo furan. Waxay u egtahay mid ka weyn tan doofaarro kale. Duleed aan urin kala duwan, dhadhan - dhanaan. Koofiyadu waa brown dahab ah, oo leh dhexroor 4-13 cm, iyada oo kor u kicin woqooyi. Lugta fangasku waa ilaa 8 cm oo dhaadheer, waxoogaa yar ayaa ka soo baxa dhulka oo ku yaal daboolka, waana midab huruud ah. Wakhtiga qaabdhaqanka - Julaay - Sebtembar.
Muuqaal astaamo ah oo doofaarradani ah ayaa ah xarig farsameysan oo leh dhexroor illaa 15 cm oo ah midab huruud ah oo bunni ah oo leh casaan casaan. Jidhku wuxuu leeyahay midab huruud ah oo isbeddel ah marka uu jebiyo guduud-casaan. Dusha sare ee daboolka waa ciriiri iyo jilicsanaan. Lugta waa cylindrical, 8 cm sare, jaalaha koowaad, ka dibna soo iibsado midab guduudan-bunni ah. Noocaan nooca fungus ah ayaa si ballaaran u faafaya Yurub. Mushtaaskan doofaarku wuxuu doorbidaa inuu koro baadka wabiyada, ee kaymaha fudud leh carrada qoyan waxayna sameysmeysaa calaamado isku dhafan.
Ma taqaanaa? Mushrooms waxaa loogu yeeraa hilibka kaynta. Waxay ka kooban yihiin borotiin badan, amino acids lagama maarmaanka u ah hawlaha caadiga ah ee maskaxda, fitamiin B si loo ilaaliyo nidaamka dareemayaasha, raad raaco xubno kor u qaada dhiigga, beta-glucans oo kor u qaada difaac, iyo waxyaabo kale oo faa'iido leh.
Paxillus vernalis mushroom
Fungus waxaa laga helaa kaymaha buuraha Waqooyiga Ameerika, Estonia, Great Britain, Danmark. Foomamka xinjir udub dhexaad ah iyo bjørk. Wakhtiga midho-dhalidda waa bisha Agoosto - Oktoobar. Koofiyadu waa miisaan, waxay yeelan kartaa midabo kala duwan oo midab jaalle ah. Dusha sare waxay noqon kartaa mid sahlan ama wax yar. Qeybta hoose waxaa lagu dhejiyaa taargo huruud ah. Saxarka fangaska waa fareem, cufan, oo aan lahayn wax caddaynaya. Midabkeeda huruudka ah ee jebinta ayaa isbeddelaya casaan-bunni. Lugta waa ilaa 9 cm sare, 2-2.5 cm ee dhexroorka, midabku wuxuu ku jajaban yahay midabka cap.
Waa muhiim! Svinushka khafiif ah waxay soo saartaa muscarin. Tani waa sun ah khatar ah, taas oo sunta ku jirta waxay la mid tahay sunta casaanka cas. Lama gubo inta uu karkarayo kalluunka.
Cunitaanka doofaarku waxay keeni kartaa dareen xasaasiyadeed oo harikeyn ah oo leh natiijada dhimashada. Sidaa darteed, ka hor inta aanad cunin hal doofaar doofaar, waa inaad adigu doorataa inaad doorato - inaad halis ku gelisid noloshaada ama aanad. Maxaad qaali u tahay - dhadhanka doofaarka ama nolosha, adiga ayaa go'aaminaya naftaada.